theworldasiseeit | Just another WordPress.com site
Posted by: zawmyohtet123 | January 22, 2011
ဟိုတစ်လောက ကျွန်တော် ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ကွန်ပျူတာအရောင်းဆိုင်ကိုရောက်ြ
ဖစ်တယ်။ ကျွန်တော်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဦးဇင်းတစ်ပါးရဲ့ အသစ်စက်စက် ကွန်ပျူတာစက်ကလေးက ချူချာလာလို့ ၀ယ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကိုပြန်ပြတာ ။ စက်ရဲ့ ချို့ယွင်းတဲ့ အပိုင်းကို ပြောပြတယ် ။ ဆိုင်ရှင်ကလည်း အတွင်းထဲဝင်သွားပြဖို့ ပြောတော့ ကျွန်တော်ရယ် ဥိးဇင်းရယ် စက်ကလေးကို မပြီး အတွင်းဘက် မှာ စက်ပြင်နေတဲ့သူတွေဆီ ရောက်သွားကြတယ် ။
သူတို့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းက ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးရယ် ။ 10 ပေ ပတ်လည် လောက်ရှိမယ် ။ အဲဒီထဲမှာ ကွန်ပျူတာ ကိုယ်စီနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်လို့ပဲ ဆိုကြပါစို့3ယောက်ကိုတွေ့တယ် ။ သူတို့ အလုပ်ပေါ်မှာ အာရုံအပြည့် ။ အခန်းတွင်းကလည်း ကွန်ပျူတာ အကောင်းတွေရော အပျက်အစီးတွေရော ၊ ဖွင့်ထားတဲ့ စစ်စတမ်ပုံးတွေရော ၊ ၀ါယာကြိုး အရောင်စုံ က သပွတ်အူလို ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး။ ဖုန်းလိုင်းတွေ ကထွက်လာတဲ့ ၀ါယာကြိုးတွေ…..။ လူခြေချစရာနေရာ အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည့် အလွန် ရှုပ်ပွနေသည့် ထိုအခန်းတွင်း ကို ၀င်သွားရတော့……၊ နောက်ပြီး အလုပ်ပေါ်မှာ အာရုံအပြည့် ရောက်နေသည့် ထို ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် လေး၏ မျက်နှာ ၊ မောက်စ်ပေါ်က သူ့လက်ချောင်းလေးများ၏ အလွန်လျင်မြန်ဖျတ်လတ်စွာ ရွေ့ ရှားနေမှု တွေကို တွေ့ရတော့…..၊ ငယ်ချစ်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရ ခံစားလိုက်ရသလို ။ ရင်းနှီးမှု အနည်းငယ်မျှသာကျန်ရစ်တော့သည် လွမ်းဆွတ်တမ်းတ ခြင်း စိတ်ကလေးက ရင်ထဲမှာ အပြေးအလွှား…၊။
ဟိုအရင်က ချစ်ခဲ့ပေမဲ့ အခု အခြေအနေအရ အချစ်သစ်က တစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပြီ လေ ။ ကျွန်တော် အချိန်အတော်ကြာ လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ်ဖြစ်နေသည့်ခံစားမူမျိုးခံစားရပြီးသည့်နောက်အလိုလိုနေရင်းက မျက်ရည် လည်သလို ။။ဟုတ်တယ် ကျွန်တော် လွမ်းနေတာ..။ သူ့ကို လွမ်းနေတာ ။
ဟိုး လွန်ခဲ့သော6နှစ် ခန့် ….
ကျွန်တော်က 10 တန်းအောင်ပြီးလို့ အစ်မ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်ရဲ့ မိတ္တူဆိုင်မှာ ၀င်အလုပ်ကူလုပ်ခဲ့တယ် ။ တဖက်ကလည်း ဆိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာစာစီဖို့ရန် ထားထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး ကို ဟိုစမ်းသည်စမ်း ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်ရင်း ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကို အစွဲကြီးစွဲလမ်းခဲ့ဖူးတယ် ။ စားလည်းသည်စိတ်၊ သွားလည်းသည်စိတ် ၊ အိပ်မက်ထဲမှာတောင် သူ့ ကို ထည့် မက်နေခဲ့ရလောက်အောင် …။ ကွန်ပျူတာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေကို စာအုပ်ဆိုင် ကနေ ၀ယ်ဖတ်တယ် ။ ရှိတဲ့ အိမ်က ငှားဖတ်တယ် ။ အဲဒီထဲကအတိုင်း လိုက် လုပ် စမ်းသပ်ကြည့် ။ လုပ်နည်းအသစ်တစ်ခု ခုများတွေ့ခဲ့ရင် ပျော်မဆုံး မော်မဆုံး ။ ထမင်းစားလို့လည်းကောင်း ။ ကွန်ပျူတာကို တစ်စတစ်စ ပို ခင်တွယ်လာခဲ့တယ် ။
စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ခဲ့တယ် ။ ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သည့်စိတ်တွေရင်ထဲမှာ မဆန့်မပြဲ ။ ထိုစဉ် တီထွင်ပညာရှင်ကြီး အက်ဒီဆင်အကြောင်း ကို ဖတ်ရတော့ အက်ဒီဆင်လို ဖြစ်ချင်ပြန်ခဲ့ …။ အိုင်းစတိုင်းအကြောင်းကို ဖတ်ရတော့ အိုင်းစတိုင်းလို ကြီး ဖြစ်ချင်ပြန်သည် ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ တီထွင်မှု ၊ စမ်းသပ်မှု ၊ ဇွဲ ၊ ထပ်ဖန်တလဲ ကြိုးစားမှု၊ အောင်ပွဲခံမှု တွေ ပြည့်နေတဲ့ သိပံသမားဘ၀ကို လိုချင်မိခဲ့ ။
ယခုဖြစ်နေတာက ဆရာဝန် တစ်ယောက် ။သက်မဲ့ကွန်ပျူတာတွေ နဲ့ အလုပ်လုပ်ရသည့်သူမဟုတ်တော့ ၊ လူတွေ …သက်ရှိလူတွေ ၊ တွေးခေါ်တတ် ၊ခံစားချက်တွေအပြည့်ရှိသည့် လူတွေ နဲ့ အလုပ်လုပ်ရသည့် သူဖြစ်လို့နေသည် ။
စမ်းသပ်ကြည့်မှုတွေ ၊ အောင်မြင်သွားပါက ဟေးခနဲအော်ကာ လက်မထောင် မှုတွေ မလုပ်သင့်သည့် ဘ၀ ။ကိုယ်ဖြစ်စေချင်သလို ဖန်တီး လို့မရ ။ စက် အတက်နှေးလို့ ဒုန်းဒုန်း ဒိုင်းဒိုင်း ထု ခွဲ ကာ ပေါက်ကွဲ ပြလို့မရ ။
သည်အစား လူနာကို မြင်ရတော့ စိတ်မချမ်းမြေ့မှု ၊ ထပ်တူ မဟုတ်တောင် လိုက်ပါဝမ်းနည်းမှု ၊ အနိဌာရုံ တွေကို သာမြင်တွေ ရသည့်လူသား တစ်ယောက်၏ဘ၀ ။ စိတ်သည် အမြဲတမ်း မလန်း နိုင်သော ဘ၀ ။
နေ့မအားညမနား စိတ်ပါရင်ပါသလို ကွန်ပျူတာဘေးမှာ ထိုင်ကာ အလုပ်လုပ်ရင်လုပ် ၊ မဟုတ်လည်း နောင် စိတ်ပြန်ပါလာမှ အားမာန်ပြန်ပြည့်ဝ မှ အလုပ်ကို ပြန်လုပ် လို့ရသည့် ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါချေ။
ကွန်ပျူတာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတုန်းက တိတ်ဆိတ်ခြင်း ၊ ငြိမ်းအေးခြင်း တို့ကို ရသလောက် ၊ လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတော့ စကား မပြောလို့မရ ၊ တိတ်ဆိတ်နေ၍လည်းမဖြစ် တော့ ။လူနာတွေ၏ နာကျင်စွာ အော်ညည်းသံ ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ရောဂါက နှိပ်စက်တော့ ကျောကော့အောင်ခံရမှုတွေကို မြင်တွ့ရ ။
ကျွန်တော် က လူတွေတိတ်ဆိတ်သည့် အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ စက်ပစ္စည်းတွေ အပြည့် ၊ ၀ါယာကြိုးတွေ အပြည့် နဲ့ တစ်ယောက်တည်း နှုတ်ဆိတ်စွာ အလုပ်လုပ် နေရသည့် ဘ၀မျိုးကို သဘောကျသည် ။ ၀မ်းနည်းစရာမရှိ ၊ စိတ်မကောင်းစရာလည်း မပါ သည့် စက်တွေ…စက်တွေ။
ခု …..စိတ်မကောင်းစရာ ၀မ်းနည်းစရာ လူတွေ….လူတွေ ။
ထိုသို့ထိုသို့ အတွေးတွေကို နှိုင်းယှဉ်တွေးရင်း……
ကဲ ဒကာတော်သွားကြရအောင် ၊ စက်က ပြုပြင်လို့ပြီးသွားပြိ ဆိုတော့ မှ ……ငယ်ချစ်ကို ခဏတွေ့ခဲ့ရပြီးမှ ချက်ချင်းခွဲခွာ နှုတ်ဆတ်ခဲ့ရသလို ခံစားမှုမျိုးဖြင့် ကျွန်တော် သူ့ကို နှုတ်ဆတ်ခဲ့လေတယ် ။
Posted by: zawmyohtet123 | December 4, 2010
ငယ်ရာက ကြီးကြမှာ ။ ။
မင်း ‘အ ကြီး’ ဖြစ်တဲ့ အခါ….
ငယ်ငယ်တုန်းက စံ နဲ့ ပေတံ ကို တော့
မေ့မပစ် လိုက် နဲ့ ကွာ ။ ။
သူတို့ တွေရဲ့ လက်တစ်ထွာ ဆိုတာ မင့် လောက်တော့
ဘယ် ရှိ နိုင် သေး မလဲ ကွာ…..။
ကလေးတွေဆိုတာ မင်းလောက်မှ မကြီးကြသေးတာ ။
တက် ..မ ဖိ.. လိုက်… ပါနဲ့ နော်ကွာ ။
ငယ်ငယ်တုန်းက စံနဲ့ ပေတံကိုတော့ လွင့်မပစ်ပါနဲ့ ကွာ….။
မင်းတို့ ငါ တို့ဆိုတာ ငယ်ရာက ကြီးကြအုံးမှာ…။
းကအပြန်..မီသရိုကအထွက်…အပြင်လမ်းမပေါ်မှာ…ဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ. ကောဇောတစ်ချပ်ဖြန်.ခင်.ထားသလို .
နှင်းမှုန်တွ အဆုပ်လိုက်ပြန်.ကျဲလို.နေတယ်…ကောင်းကင်ကနေ အဖြူရောင်နှင်းဖတ်တွေ ဖွေးဖွေးလှုပ်အောင် ကျနေလိုက်တာ…အရမ်းကြည.်လို.ကောင်းပါတယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာ တင်ကျန်ခဲ.တဲ.နှင်းမှုန်လေးတွေကို လက်နဲ.ထိကြည်.တော. …ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်…ကျွန်တော်.ရှိချိန်သတိထားမိသလောက် ဒါဟာမော်စကိုရဲ.ပထမဆုံးနှင်းပါပဲ
လူသွားလမ်းရဲ.ဘေးမှာတော. ဆောင်းတွင်းရဲ.အအေးဒဏ်ကြောင်. သစ်ရွက်တွေ မနေနိုင်တော.တဲ. လူလုပ်သစ်တောငယ်လေးရဲ. ကြမ်းပြင်ဟာ
အဖြူရောင် ကောဇောအတိဖြစ်လို.နေတယ်….ကြည်ပြီးတောက်နေတဲ. နှင်းရဲ.အဖြူရောင်ဟာ…မှောင်ရီပျိုးစ ပတ်ဝန်းကျင်တောင်လင်းထိန်သွားသလိုပဲ..
နှင်းတွေကြောင်. လျှောက်နေကျ လမ်းရဲ. ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ လျှောက်ဖူးတဲ.လမ်းမဟုတ်တော.ဘဲ မလျှောက်ဖူးတဲ.လမ်းကလေးအ ဖြစ် အရောင်ပြောင်းလဲသွားတော.တယ်..
နှင်းကို ဒီမှာတော.2မျိုးခေါ်ကြတယ်…ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမီးခိုးလိုမှုန်နေအောင် ကျတဲ. မြန်မာပြည်လိုနှင်းမျိုးကို (снег…စညပ်(ဂ်) ) လို.ခေါ်တယ်ဗျ
ခုလို မိုးရွာသလိုမျိုး ..၀ါဂွမ်းတွေ လေထဲလွင်.နေသလိုမျိုး အဆုပ်လိုက်ကျတဲ. နှင်းမိုးတွေကိုတော. ( мороз ..မာရို.(ဇ်)) လို.ခေါ်တယ်…ကျောင်းမှာ သင်နေရတဲ. မာရို. သီချင်းလေးကိုသတိရသွားစေတယ်..
မော်စကိုရဲ.ဆောင်းကာလဟာ အပြောင်းအလဲတွေများပါတယ်…တဖြည်.ဖြည်းအေးစိမ်.လာတဲ. အထိအတွေ.ဟာ အရမ်းကိုသိသာလာတယ်…
အပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ. အေးစိမ်.နေတဲ. လေပြည်ညင်းရြ.အထိအတွေ.က ပါးပြင်တ၀ိုက်ကို ထုံကျင်သွားစေတယ်…ဒါမဲ. ဒီရာသီဥတုလေးမှာ လမ်းလျှောက်ရတဲ.ခံစားချက်က အရမ်းလတ်ဆတ်တယ်းး
ကြာကြာလမ်းလျှောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ. နွေးထွေးလတ်ဆက်တဲ.အထိအတွေ.က အေးစက်စက်အထိအတွေ.နေရာမှာ ချွေးမထွက်ဘဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်းရောက်လာတယ်….
မော်စကိုရောက်စ september ညနေခင်းဟာ..အချိန်ကုန်ခဲလှတဲ.ညနေခင်းတွေလေ…ည 8 နာရီထိ နေမ၀င်သေးတဲ. ညနေခင်းတွေမှာ…ကျွန်တော်တို.လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ.ကြတယ်..
ခဏတာမြင်လိုက်ရပြီး တစာင်းဝင်သွားတဲ. နေကိုကြည်.ပြီး မြန်မာပြည်ကို အလွမ်းပိုတယ်…ခု ညနေခင်းတွေမှာ နေကိုမမြင်လိုက်တဲ. နေ.တွေ ကိုနေ.တိုင်းနီးပါးဖြတ်သန်းနေရပြီ
တစ်ခါစာသင်ခန်းမှာပေါ. စာသင်နေရင်း…နေအလေင်းရောင်က ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာတယ်…ပိတ်ထားတဲ.မှန်ပြတင်းပေါက်ကိုဖြတ်ပြီး အလင်းရောင်က တိုက်ရိုက်ဖောက်ဝင်လာတယ်..
ကျွန်တော်.ရှေ.မှာထိုင်နေတဲ. ဆရာမရဲ. မျက်နှာ ပေါ်ကို နေအလင်းရောင်က တိုက်ရိုက်ကျရောက်နေတယ်…မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးငြိမ်နေတဲ.ဆရာမကိုကြည်.ပြီး..
နေစူးလို.ဖြစ်မှာပဲ ဆိုပြီး ပြတင်းပေါက်လိုက်ကာကို ထပိတ်လိုက်တော. ဆရာမအလန်.တကြားပြောတယ်…မပိတ်ပါနဲ. နေအလင်းရောင်က အရမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်တဲ….
ကျောင်းကအပြန်4နာရီပဲရှိသေးတဲ. ညနေခင်းတွေဟာ မှောင်စပြုနေပါပြီ…တစ်ခါတစ်ရံ စာသင်ချိန်ပြီးအပြန်နောက်ကျတဲ.ညနေ5နာရီဟာ…မီးတွေထိန်လင်းနေတဲ. ညကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ရတဲ.ညတွေဖြစ်လာပါပြီ
အရင်က မြန်မာပြည်နဲ. မော်စကိုအချိန်ကွာခြားချက်ဟာ 23း0 ရှိရာကနေ အခုဆောင်းတွင်းရောက်လာတော. 33း0 ဖြစ်လာပြီ….မော်စကိုမှာ ဒီဆောင်းတွင်းရောက်တာနဲ.အချိန် တစ်နာရီနောက်ဆုတ်တယ်…
ဒီနေ.မနက်ခင်း..အင်တာနက်ကအချိန်ကိုကြည်.လိုက်တော. တစ်နာရီနောက်ဆုတ်သွားတာတွေ.ရတယ်…ဒါနဲ.လက်ကနာရီကိုလည်း အချိန်တစ်နာရီနောက်ဆုတ်လိုက်ရတော.တယ်..
အင်း…ကျွန်တော်တို.ကျောင်းက ပြန်ရောက်ချိန် ညနေ53း0 ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ည9နာရီ လူခြေတိတ်စပြုနေပြီလေ…..
မော်စကို ရောက်တာ တစ်လပြည်.ပါပြီ….သူစိမ်းဆန်နေသေးတဲ့ ရာသီဥတုကိုတော့ အန်တုနေရဆဲပါပဲ။ +၂ လောက် ပဲ ရှိတဲ့ အအေးဒဏ်ကိုတော့ အတော်အတန်ခံနိုင်ရည်ရှိနေကြပါပြီ ။
နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ်. – ၂၀ ထိကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေရဦးမယ်။ ဘာမှမ၀တ်သေးခင် thermal wear တစ်စုံ အရင်ကောက်စွတ်မယ်။
ဆောင်းတွင်းစီးဖိနပ် ကို ခြေအိတ် ထူထူခံစီးလိုက်မယ်။
ပြီးရင်..Thermalwear အပေါက..တီရှပ်တစ်ထည်စွတ်လိုက်မယ်။အဲအပေါ်မှာ စွယ်တာထူထူထပ်လိုက်မယ် ။
အဲအပေါ်ကထပ်ပြီး သားရေဂျာကင်ထူထူကို ဇစ်ပြည်.တပ်ပြီးဝတ်ထားမယ်။
လည်ပင်းနေရာနဲ.မျက်နှာကိုတော. မာဖလာကြီးကြီးလေး ပတ်ထားလိုက်ရင်ပြီးပြည့် စုံတဲ့ ဆောင်းဝတ်စုံဖြစ်သွားပြီပေ့ါ.။
နောက်ဆုံး..တစ်ကိုယ်လုံးမှာမျက်လုံး ၂ လုံးလေးပဲကျန်တော.တယ်။
ဒါကလာမယ်. ဆောင်းကို အန်တုဖို. ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာဗျ ။
မော်စကိုမြု.သူ မြို.သား..နယ်ခံလူတွေကတော. အတော်စမတ်ကျအောင်ဝတ်စားတတ်ကြတာက်ုတွေ.ရမယ်။
အကျီ ဘောင်းဘီ..ကိုယ်ထည်နဲ. ကွတ်တိအပိုလိုမရှိ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်ဝတ်တတ်ကြတယ်.။
ဒါမဲ.အခန်းမှာတော. HEATER ရှိတဲ.အတွက်..သာမာန်ဝတ်ထားလို.ရတယ်ဗျ…မအေးဘူး…အပြင်ထွက်လိုက်ရင်တော.တော်တော်လေးအေးတယ် ။
တစ်ရက်တော. ဗီဇာ ကိစ္စလုပ်ဖို. ဘေးကအဆောင်ကိုသွားတာ…ခဏပဲလေဆိုပြီး..မြန်မာကွင်းထိုး ဖိနပ်နဲ.ရိုးရိုးလေးဆင်းလိုက်တာ….ခြေချောင်းတွေ ကျင်ပြီး အေးကိုက်လာလို.
သူတို.ဆီမှာဖိနပ်စီးရင်..ခြေချောင်းပေါအောင် ဘယ်တော.မှမစီးဘူးဗျ…ရိုင်းတယ်တဲ. (အေးလို.လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်)…ကွင်းထို.စီးရင်လည်း.ခြေအိပ်ခံစီးရတော.တယ်…..
ကျွန်တော်တို.သွားနေရတဲ. ကျောင်းဟာ အတော်လေးဝေးပေမယ်. နေ.တိုင်းသွားနေ၇တော.လည်း နီးနီးလေးထင်နေပါပြီ။ မီသရို (မြေအောက်၇ထား) စီးချိန်..၄၅ မိနစ်ကတော.
မပြောင်းလဲတဲ.အချိန်ပါပဲ ။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ရထားတစ်စီးနဲ.တစ်စီးဟာ စက္ကန်. ၅၀ ပဲကွာတယ်။ အရှိန်လည်းမြန်..အချိန်မှန်တော..ကျောင်းသွားချိန်ကို ကွက်တိစီစဉ်လို.ရ.တယ်လေ ။
ကျောင်းနောက်ကျတာကိုတော. မကြိုက်ကြဘူး..နောက်ကျရင်လည်းမ၀င်ရတော.ဘူးဗျ။ ဘာကြောင်.ပဲပျက်ပျက်…စာသင်ချိန်မှာမရှိရင် ပျက်ကွက်မှတ်တယ်.။
ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်..english လို barrier တစ်ခုသာကျွန်တောတို.မှာရှိမထားရင်……
ရုရှားစာ သင်ရတာ ပိုလွယ်မလား…ပိုခက်မလားလို.ပေါ…….ဘာသာစကားကိုများများတတ်ထားလေ..ပိုကောင်းလေပါပဲ ။
ဒီမှာအနေကြာပြီဖြစ်တဲ. တရုတ်…မလေး ကျောင်းသားတွေကတော. နယ်ခံ့လို ပြောဆိုတတ်နေပြီ…..ကျွန်တော်တို.ရှေ.ပတ်စဉ်ကစီနီယာတွေလည်း
ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောဆိုနေကြတာကိုတွေ.၇တယ်။ ဘာသာစကားတစ်ခုဟာ အမြဲတမ်းထိတွေ.နေရင်..သင်ယူတတ်မြောက်ဖို.လွယ်ကူပါတယ် ။
ဒါမဲ. ဟန်ချက်ညီဖို.တော. အရေးကြီးမယ်ထင်တယ်….. writing skill, listening skill, speaking skill, reading skill တွေဟာ…သူ.အကန်.နဲ.သူပဲဗျ..မတူဘူး
listening skill ကောင်းတော. နားလည်ပေမယ်. speaking skilူ မှာ အားနည်းကောင်းအားနည်းနိုင်တယ်..မီးနင်းတွေများများသိထားပေမယ်….ပြောကျင်. ပြောခွင်.မ၇ှိရင်မကြုံရင်
တော. speaking အားနည်းတတ်တယ်…ဒီတော. များများလေ.လာ..များများဖတ်…များများနားထောင်..များများပြောမှ ဟန်ချက်ညီညီတိုးတက်လာနိုင်တာတွေ.ရတယ်
ရုရှားစကာဟာ အတော်လေးခက်တဲ.ထဲမှာတော.ပါတယ်…လွယ်တဲ.အပိုင်းတော.လည်းလွယ်ပြန်ရော..စကားတစ်ခွန်းကို နေရာတော်တော်များများသုံးနိုင်တယ်
ခက်တာတော.လည်း…Exception တွေအတော်များပြန်ရော….မှတ်ထားရတာတွေများတယ်….sentence တစ်ောကာင်းပြောမယ်ဆိုရင်..အချိန်အခါအရ..
ပြောတဲ.ပုံစံအရ…verb form တွေချိန်း..pronoun တွေချိန်း အထီးအမ ခွဲ…နဲ.စပြီးသိခါစ ကျွန်တော်တို.အဖို. နားလည်အောင်ပြောဖို. အတော်စဉ်းစားရတယ်
ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ. စကား နားလည်သွာတယ်ဆိုရင် အတော်ပျော်ရတယ်…..ဒါမဲ. သူပြန်ပြောတဲ.စကားတွေကိုတော. သိတာကသိ မသိတာကမသိသေးနဲ…..
နောက်ဆုံး International language (body language)ကိုသုံးရတဲ.အခါလည်းရှိသေးတယ်…..အင်း အချိန်နဲ.အမျှ ပြောတတ်ဆိုတတ်…နားလည်တတ်လာပြီလို.မှတ်ရတယ်